Onke amanqaku kunye nokubalulwa kwePixel 3a evuzayo ngaphambi kwengcaciso yayo namhlanje | I-Androidsis
El Pixel 3a ukubhengezwa namhlanje kuGoogle I / O 2019, Ingqungquthela yehlabathi yabaphuhlisi apho silindele khona iindaba Android Q. Kwaye, ngaphambi kokuba yenzeke, zonke iinkcukacha zesixhobo ziye zavuza.
Ukuvuza kubandakanya zonke izinto eziza kuba nazo ifowuni. Masibone…
1 I-Pixel 3a iyavela: iinkcukacha ezichaziweyo
I-Pixel 3a iyavela: iinkcukacha ezichaziweyo
I-Google Pixel 3a ispredishithi (eguqulelwe) pic.twitter.com/AGBF3ITw3v
-I-Roland Quandt (@rquandt) Ngamana 6, 2019
Ngokwento entsha entsha e-oveni ekwaziyo ukuyityhila, iGoogle Pixel 3a iya kuba nayo I-5,6 intshi OLED FullHD + isikrini esigcweleyo ngesisombululo seepixels ezingama-2,220 x 1,080 kunye nomlinganiso we-18: 9. Oku kuyakuhlala 'kuvuliwe' kwaye 'kuhlala umamele' amanqaku ukubonisa. Kwakhona umenzi uthi isikrini sinomlinganiso we-100,000: 1 umahluko.
Isixhobo siya kuba ne-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yendawo yokugcina yangaphakathi kunye neprosesa Snapdragon 670 ukusuka kwiQualcomm kunye neAdreno 615 GPU.Akukhankanywa nguqulo ye-128GB okanye inkxaso yolwandiso lokugcina.
IPixel 3a iya kuba nefayile ye- Ikhamera ye-12.2 MP 1.4 µm Dual Pixel kunye f / 1.8 ukuvula ngasemva. Ikhamera iya kuba ne-autofocus, i-pixel ye-pix phase detection, ukuzinza kwe-optical kunye ne-elektroniki, kunye ne-76 ° field of view. Kananjalo iselfowuni iya kukwazi ukurekhoda iividiyo ezili-1080p ngesakhelo esingama-30, 60 okanye ezili-120 ngomzuzwana, iividiyo ezingama-720p ezingama-30, 60 okanye ezingama-240 kwisibini ngomzuzwana, kunye nevidiyo ezingama-4K kwizakhelo ezingama-30 ngomzuzwana.
Ikhamera ye-selfie yi-8 MP 1.12 µm f / 2.0 sensor enendawo yokujonga eyi-84 °. Iya kuba nakho ukurekhoda i-1080p, i-720p kunye ne-480 yeevidiyo kwiifreyimu ezingama-30 ngomzuzwana.
Ukucoca amaxabiso kwiGoogle Pixel 3a kunye nePixel 3a XL
Inye I-3,000 mAh ibhetri Ngaphantsi komzimba we-polycarbonate oxhasa ukutshaja okukhawulezayo kwe-18 kunye ne-USB-PD 2.0 ngezibuko le-C 2.0 yohlobo C. Kwaye, ukunxibelelana, i-Pixel 3a iya kuba ne-nano-SIM slot enye, inkxaso ye-eSIM kwiimarike ezikhethiweyo, i-3.5mm jack jack, i-NFC, i-band-band ye-Wi-Fi, i-GPS kunye ne-Bluetooth 5.0+ LE ngenkxaso ye-AptX. , I-AptX HD kunye neekhowudi ze-LDAC.
Esi sixhobo siza kuba nezithethi zestereo, isithwebuli somnwe ngasemva, inkxaso yeAgegege esebenzayo, kunye iya kuqhuba i-Android Pie 9.0 ngaphandle kwebhokisi. Ubunzima bayo bunikwa nge-147 gram kunye nobukhulu bayo kwi-151.3 x 70.1 x 8.2 mm.
IPixel 3a kunye ne3a XL yokuhanjiswa
Iphepha elichazayo liyatsho ifowuni ayizukukrwempa, kodwa ipeyinti inokucobeka ukuba iyawa. Umbala wezinto ezinje nge-denim kunye nofele unokuphela emzimbeni wefowuni ngenxa yokujonga okwahlukeneyo. Kungenxa yokuba sisiphelo sendlela ephantsi.
IPixel 3a iya kuba noMbono woBusuku wemifanekiso eqaqambileyo, eneenkcukacha eziphantsi ngaphandle kokuqaqamba, imo yomzobo obukekayo kunye nobukhali obukhethekileyo ngokubonga ngokuhamba komsebenzi we-autofocus onokuthi ugxile nakwizifundo ezihambayo. Kukho ukugcinwa kweefoto zikaGoogle ezingenamda kuyo yonke imifanekiso esemgangathweni kunye nevidiyo.
Inkqubo yokhuseleko 'yeTitan M' iqinisekisa ukuba idatha yakho kunye nenkqubo yokusebenza ikhuselekile. Abanini baya kuba nakho ukutshintsha ngokulula kwizixhobo zabo zangaphambili ukuya kwiPixel 3a basebenzisa 'iAdapter yokuTshintsha ngokukhawuleza'. Ukongeza koku, kufanelekile ukuba uqaphele ukuba ifowuni iya kufumana uhlaziyo lokhuseleko kunye nenkqubo yokusebenza yokuhlaziya iminyaka emithathu ubuncinci.
Ngakolunye uhlangothi, UGoogle uthi unebhetri efanelekileyo Ufunda ukusebenzisa ifowuni yakho kwaye wazi ukuba zeziphi iinkqubo ozisebenzisa rhoqo, ngaloo ndlela unciphisa amandla asetyenziswa ngabantu abangaphantsi rhoqo. Uyakukwazi ukufumana ubuncinci iiyure ezingama-7 zokusebenzisa kwimizuzu eli-15 kuphela yokutshaja (ngenani lezinto ezikhubazekileyo).
Kwimizuzu nje embalwa, i-Google I / O 2019 kaGoogle iya kuqala. Apho sinokubona ukuba onke la manqaku acacisiweyo ayaphela ayinyani, ke akufuneki silinde ixesha elide ukuze sazi ukuba kuyakuba njani kwaye ziziphi izibonelelo zikaGoogle IPixel 3a iya kuqhayisa. Yintoni egqithisile, Siza kwazi yonke into malunga nokwahluka kweXL kwesi selula, eziza kuba nobukhulu obukhulu kwaye zinokugcina iinkcukacha ezithile ezahlukeneyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Onke amanqaku kunye nokucaciswa kwePixel 3a kuvuze ngaphambi kwale nkqubo yanamhlanje
I-Realme iqinisekisa ukuba i-Realme X iza kufika nekhamera ephumayo kunye ne-bezels eziphezulu